नि: शुल्क आमाबाबुको इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको मार्गदर्शिका - इनाम इनाम
समाचार ब्लग नि: शुल्क आमाबाबुको इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको गाइड
अभिभावक र हेरचाहकर्ताहरू बच्चाहरूको लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण रोल मोडेल र मार्गनिर्देशन हुन्। यौवनकालमा, बच्चाहरू यौनको बारेमा विशेष उत्सुक हुन्छन् र यसको बारे सकेसम्म धेरै जान्न चाहन्छन्। यो किनभने प्रकृतिको नम्बर एक प्राथमिकता प्रजनन हो र हामी यसमा ध्यान केन्द्रित गर्न तयार छौं, तयार छ वा छैन। इन्टरनेट पहिलो स्थान हो जहाँ बच्चाहरूले उत्तरहरू खोज्छन्। यसैले हामीले हाम्रो नि: शुल्क अभिभावकको मार्गनिर्देशन यहाँ राखेका छौं।
नि: शुल्क पहुँच, स्ट्रिमि,, हार्डकोर अश्लीलता इतिहास मा सबैभन्दा पहिले सबैभन्दा अनियन्त्रित सामाजिक प्रयोगहरू मध्ये एक हो। यसले जोखिमपूर्ण व्यवहारको पूरै नयाँ दायरा जोखिम लिन खोज्ने मस्तिष्कमा थप गर्दछ। यसका बारे अधिक बुझ्नको लागि यस छोटो भिडियो हेर्नुहोस् किशोर मस्तिष्क एक न्यूरो वैज्ञानिकको अभिभावकको सल्लाहको साथ।
हामी आशा गर्दछौं कि यस अभिभावकको ईन्टरनेट पोर्नोग्राफीको मार्गनिर्देशनले तपाईंको बच्चाहरूलाई उनीहरूको यौन विकास सुरक्षित रूपमा नेविगेट गर्न मद्दत गर्दछ र तपाईंलाई उत्कृष्ट अभिभावक वा हेरचाहकर्ता हुन सक्नुहुन्छ।
धेरै किशोर-किशोरीहरू भन्छन कि उनीहरूका बाबुआमा उनीहरूसँग अश्लील कुराकानी गर्न अझ सक्रिय हुन्छन्। यदि तिनीहरूले तपाईंलाई सहयोगको लागि सोध्न सक्दैनन् भने, तिनीहरू कहाँ जानेछन्?
यो हेर पोस्टर अधिक प्रयोगको सबैभन्दा सामान्य परिणामहरूको सारांशको लागि।
सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा लोकप्रिय वेबसाइट Pornhub चिन्ता उत्पन्न गर्ने भिडियोहरू प्रचार गर्दछ जस्तै अनैतिक अश्लील, गला दबा, यातना, बलात्कार र गैंगब्या .हरू। Incest अनुसार सब भन्दा छिटो बढ्ने विधा हो Pornhubआफ्नै रिपोर्टहरू। धेरै जसो नि: शुल्क छन् र पहुँच गर्न सजिलो छ।
यो2मिनेट, उज्यालो एनिमेसन एक द्रुत सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ। तपाईं आफ्ना बच्चाहरूलाई पनि देखाउन सक्नुहुन्छ किनकि यसले अश्‍लील सामग्री समावेश गर्दैन।
यो5मिनेट भिडियो न्यूजील्याण्डको एक वृत्तचित्र बाट एक अंश हो। यसमा एक न्यूरोसर्जनले पोर्न लत मस्तिष्कमा कस्तो देखिन्छ भनेर वर्णन गर्दछ र यो कोकिन लतसँग कसरी मिल्दोजुल्दो छ भनेर देखाउँदछ।
यो TEDx प्रोफेसर गेल डाइन्स द्वारा कुरा "एक अश्लील संस्कृतिमा बढ्दै"(13 मिनेट) स्पष्ट शब्दहरूमा वर्णन गर्दछ कसरी संगीत भिडियोहरू, अश्लील साइटहरू र सोशल मिडियाले आज हाम्रा बच्चाहरूको यौनिकतालाई आकार दिन्छ।
यहाँ एक मजेदार टेडक्स कुरा हो (16 मिनेट) भनिन्छ "कसरी यौनकर्मीहरू पढाउँछन्"एक अमेरिकन मातृ र यौन शिक्षक द्वारा सिंडी पियर्स। उनको आमाबाबुको गाइडले भन्छ किन किन पोष्टको बारेमा पोथी च्याटहरू तपाईंको पोष्टको बारेमा धेरै आवश्यक छ र उनीहरूको चासो कस्तो हुन्छ। यी कुराकानीहरू कसरी गर्ने भन्ने बारे थप स्रोतहरूको लागि तल हेर्नुहोस्।
छ वर्ष भन्दा कम उमेरका केटाकेटीहरूले हार्डकोर अश्लील सामग्री पहुँच गरिरहेका छन्। केही बच्चाहरू मोहित हुन्छन् र अधिक उत्सुकताका साथ अधिक खोजी गर्दछन्, अरूहरू आघात हुन्छन् र दुःस्वप्न छन्। हार्डकोर वयस्क सामग्री कुनै पनि उमेरका बच्चाहरूका लागि उपयुक्त हुँदैनन् किनभने उनीहरूको मस्तिष्क विकासको चरण हुन्छ। यहाँ छ रिपोर्ट एक्सएनयूएमएक्स मा अपडेट गरिएको "" मलाई हेर्नु सामान्य हो भनेर थाहा थिएन… "अनलाइन पोर्नोग्राफिको मूल्य, बच्चाहरु र युवा व्यक्तिको आस्था, व्यवहार र व्यवहारमा पार्ने असरको गुणात्मक र मात्रात्मक परीक्षा।" यो मिडिलसेक्सबाट कमिसन गरिएको थियो। एनएसपीसीसी र इ England्ल्यान्ड र वेल्सका लागि बाल आयुक्तद्वारा विश्वविद्यालय।
बच्चाहरूसँग कुरा गर्नको लागि शीर्ष सुझावहरू
“दोष र लाज नमान्नुहोस्” अश्‍लील सामग्री हेर्नका लागि बच्चा। यो जताततै अनलाइन छ, सोशल मिडिया र संगीत भिडियोहरूमा पपिंग गर्दै। यो बेवास्ता गर्न गाह्रो हुन सक्छ। अन्य बच्चाहरु यो हाँस्न वा बहादुर को लागी मा पारित, वा तपाइँको बच्चा यो मा ठोकर सक्छ। तिनीहरू पक्कै पनि यसलाई सक्रिय रूपमा खोजिरहेका हुन सक्छन्। तपाईंको बच्चालाई यो हेर्नबाट केवल निषेध गर्नाले मात्र यो अधिक प्रलोभनमा पार्छ, किनकि पुरानो भनाइले भन्छ, 'निषिद्ध फल सबै भन्दा राम्रो स्वाद छ'।
लाइनहरू राख्नुहोस् संचार खुला ताकि तपाईं पोर्नको वरिपरि मुद्दाहरू छलफल गर्नको लागि कलको पहिलो पोर्ट हो। छोराछोरीले जवान युवतीको यौन सम्बन्धमा स्वाभाविक उत्सुकता पाएका छन्। अनलाइन अश्लील कसरी राम्रो तरिकाले सेक्समा राम्रो हुन जान्न राम्रो तरिकाले जस्तो देखिन्छ। पोर्नोग्राफीको बारेमा आफ्नै भावनाको बारेमा खुला र ईमानदार हुनुहोस्। एक जवान व्यक्तिको रूपमा पोर्नको लागी आफ्नै आफनो प्रदर्शनको बारेमा कुरा गरिरहनुहोस्, भले यो असहज हुन्छ।
बच्चाहरूलाई सेक्सको बारेमा एक ठूलो कुराको आवश्यकता छैन। तिनीहरू धेरै कुराकानी चाहिन्छ समय बित्दै जाँदा तिनीहरू किशोरावस्थाका वर्षहरू हुँदै गए। प्रत्येक उमेर उपयुक्त हुनुपर्दछ, यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने मद्दतको लागि सोध्नुहोस्। बुबाहरू र आमाहरू दुबैले आफैं र आफ्ना बच्चाहरूलाई आज प्रविधिको प्रभावको बारेमा शिक्षा दिन भूमिका खेल्नु आवश्यक छ।
ती गाह्रो कुराकानीहरूको साथ मद्दत गर्नुहोस्
पूर्व समाजशास्त्र प्रोफेसर, लेखक र आमा, डा Gail Dines, संस्कृति पुनर्वित्त को संस्थापक हो। उनको TEDx कुरा माथि हेर्नुहोस्। उनी र उनको टोलीले एक नि: शुल्क उत्तम अभ्यास टूलकिट विकास गरेका छन्, जसले आमाबाबुलाई अश्लील लचिलो बच्चाहरूलाई हुर्काउन मद्दत गर्दछ। कसरी कुराकानी गर्ने: हेर्नुहोस् संस्कृति प्रफर्ती आमाबाबु कार्यक्रम।
यो कोलेट स्मार्ट, एक आमा, पूर्व शिक्षक र मनोवैज्ञानिक भनिने नयाँ पुस्तक हो "तिनीहरू ठीक हुनेछन्“। पुस्तकमा 15 कुराकानीको उदाहरणहरू छन् जुन तपाईं आफ्ना बच्चाहरूसँग लिन सक्नुहुन्छ। वेबसाइटसँग लेखकको साथ केहि उपयोगी विचारहरू साझा गर्ने केही उपयोगी टिभी अन्तर्वार्ता पनि छन्।
स्मार्टफोनको बारेमा शीर्ष सुझावहरू
तपाईंको बच्चालाई स्मार्टफोन वा ट्याब्लेट दिँदै ढिलाइ सकेसम्म लामो को लागी। मोबाइल फोनको मतलब तपाई सम्पर्कमा रहन सक्नुहुन्छ। प्राथमिक वा प्राथमिक विद्यालयमा कडा मेहनतको लागि इनाम जस्तो देखिन्छ भने माध्यमिक विद्यालयमा प्रवेश गरेको स्मार्टफोनमा तपाईंको बच्चालाई प्रस्तुत गर्न, अर्को महिनाहरूमा उनीहरूको शैक्षिक प्राप्तिलाई यसले के गरिरहेको छ भनेर अवलोकन गर्नुहोस्। के बच्चाहरूलाई वास्तवमै 24 घण्टा एक दिनको इन्टरनेटमा पहुँचको आवश्यकता छ? जब बच्चाहरूले धेरै अनलाइन होमवर्क असाइनमेन्टहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्, मनोरञ्जन प्रयोग एक दिनको 60 मिनेटमा प्रतिबन्ध गर्न सकिन्छ, एक प्रयोगको रूपमा? त्यहाँ छन् धेरै अनुप्रयोगहरू इन्टरनेट उपयोगको निगरानी गर्न विशेष गरी मनोरञ्जन उद्देश्यका लागि। बच्चाहरू2वर्षहरू र अन्तर्गत स्क्रिन प्रयोग गर्नुपर्दैन।
रातको इन्टरनेट बन्द गर्नुहोस्। वा, धेरै कम मा, तपाइँको बच्चाको बेडरूमबाट सबै फोनहरू, ट्याबलेटहरू र गेमि। उपकरणहरू हटाउनुहोस्। पुनर्स्थापनात्मक निद्राको अभावले धेरै बच्चाहरूमा तनाव, डिप्रेसन र चिन्ता बढाइरहेको छ। उनीहरूलाई पूरा रातको निद्रा आवश्यक छ, कम्तिमा आठ घण्टा, तिनीहरूलाई दिनको शिक्षा एकीकृत गर्न, तिनीहरूलाई बढ्न मद्दत गर्न, उनीहरूको भावनाहरूको भावना बनाउन र राम्रो महसुस गर्न मद्दत गर्न।
तपाईंको बच्चाहरूलाई थाहा छ अश्लील बहु-अरब डलरद्वारा डिजाइन गरिएको छ प्रविधि कम्पनीहरु "हुक" प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको जागरूकता बिना बानी बनाउनका लागी उनीहरूलाई बढीको लागि फिर्ता आउँदै राख्न। तिनीहरूको ध्यान राख्नु सबै कुरा हो। कम्पनीहरू तेस्रो पक्षहरू र विज्ञापनदाताहरूलाई प्रयोगकर्ताको इच्छा र बानीको बारेमा अन्तरगत जानकारी बेच्न र साझा गर्नुहोस्। यो अनलाइन गेमिङ, जुआ र सोशल मिडिया जस्तै नशेको जस्तो बनेको छ कि प्रयोगकर्ताहरू ऊब र चिन्तित भए जित्नका लागि फिर्ता आउँदैछन्।
विरोधको साथ व्यवहारबच्चाहरू पहिलोमा विरोध गर्न सक्दछन्, तर धेरै बच्चाहरूले हामीलाई भनेका छन् कि उनीहरुका आमाबाबुले तिनीहरूलाई क्युफ्यूजहरू लागू गर्न र तिनीहरूलाई स्पष्ट सीमा दिन्छन्। तपाईं आफ्नो बच्चालाई 'शाब्दिक' आफ्नो उपकरणहरूमा छोडेर कुनै पनि एहसान गरिरहनु भएको छैन।
दोषी महसुस नगर्नुहोस् तपाईंको बच्चाहरु संग उत्तेजित कार्य को लागी। उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य र भलाई तपाईंको हातमा धेरै धेरै छन्। तपाईंको बच्चाले यो चुनौतीपूर्ण विकासको विकासलाई नेभिगेट गर्न मद्दत गर्न आफैलाई ज्ञान र खुल्ला हृदयको साथमा राख्नुहोस्। यहाँ छ सल्लाह बच्चा मनोचिकित्सकबाट।
हाल अनुसन्धान सुझाव दिन्छ कि एक्लो फिल्टरले तपाईंका छोराछोरीहरूलाई अनलाईन पोर्नोग्राफीको पहुँचबाट जोगाउन सक्दैन। यो आमाबाबुको मार्गदर्शन अझ बढी महत्त्वपूर्ण रूपमा खुल्ला सञ्चार खोल्न आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। अझ अश्लील अश्लील प्रयोग गर्न तथापि सधैं राम्रो सुरुवात हो कि युवा बच्चाहरु संग। यो लगाउन लायक छ फिल्टरहरू सबै इन्टरनेट उपकरणहरूमा र जाँच गर्दै एक मा नियमित आधार उनीहरू काम गर्दैछन्। चाइल्डलाइन वा तपाइँको इन्टर्नेट प्रदायकसँग फिल्टरहरूमा भर्खरको सल्लाहको बारेमा जाँच गर्नुहोस्।
कुन अनुप्रयोगहरूले मद्दत गर्न सक्छ?
त्यहाँ धेरै सफ्टवेयर र समर्थन विकल्पहरू छन्। Ikydz आमाबाबुलाई आफ्ना बालबालिकाको प्रयोगको अनुगमन गर्न अनुमति दिने एउटा एप हो। ग्यालरी गार्जियन आमाबाबुहरूलाई उनीहरूको बच्चाको उपकरणमा देखा पर्ने बेलामा सूचित गर्दछ। यो sexting को आसपास जोखिम संग सौदों।
क्षण एक नि: शुल्क अनुप्रयोग जसले व्यक्तिलाई तिनीहरूको प्रयोगलाई अनलाइन अनुगमन गर्न अनुमति दिन्छ, सीमा सेट गर्नुहोस् र ती सीमाहरूमा पुग्दा नगदहरू प्राप्त गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरूले महत्त्वपूर्ण मार्जिन द्वारा उनीहरूको उपयोगलाई कम गर्नु पर्ने प्रवृत्ति छ। यो एप समान छ तर निःशुल्क छैन। यसले मानिसहरूलाई सहयोगको साथमा उनीहरूको मस्तिष्क रिबुट गर्न मद्दत गर्दछ। यो भनिन्छ Brainbuddy.
यहाँ केहि अन्य प्रोग्रामहरू उपयोगी छन् जुन उपयोगी हुन सक्छ: करार आँखाहरू; बार्क; NetNanny; सहभागी; Qustodio अभिभावकीय नियन्त्रण; WebWatcher; Norton परिवार प्रीमियर; OpenDNS गृह वीआईपी; PureSight बहु। यहाँ एउटा लेख हो र सूची पीसी विश्व बाट जुलाई 2019 बाट। यस सूची मा तिनीहरूको उपस्थिति पुरस्कार पुरस्कार फाउण्डेशन द्वारा एक समर्थन छैन। हामी यी उत्पादनहरूको बिक्रीबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दैनौं।
बजार मा सबै भन्दा राम्रो पुस्तक हाम्रो मानद अनुसंधान अधिकारी गैरी विल्सन द्वारा छ। हामी त्यो भन्दछौं तर यो सत्य हुन्छ। यसलाई भनिन्छ “तपाईंको ब्रेन पोर्न: इन्टरनेट पोर्नोग्राफी र लतको उभरिरहेको विज्ञान"। यो एक महान आमा बुबा को गाइड छ। यो तपाइँको बच्चाहरु को लागी पढ्न को लागी एक महान पुस्तक हो किनकि यो अन्य युवा मानिसहरु द्वारा सयौं कथाहरु र अश्लील संग आफ्नो संघर्ष छ। धेरैले कनिलो उमेरमा इन्टरनेट पोर्न हेर्न थाले।
ग्यारी एक उत्कृष्ट विज्ञान शिक्षक हो जसले मस्तिष्कको पुरस्कार, वा प्रेरणा, गैर-वैज्ञानिकहरूको लागि धेरै पहुँचयोग्य तरिकामा प्रणाली व्याख्या गर्छन्। पुस्तक आफ्नो लोकप्रिय मा एक अपडेट छ TEDx 2012 बाट कुरा गर्नुहोस्।
किताब पेपरब्याकमा, किन्डलमा वा अडियोबुकमा उपलब्ध छ। यो अक्टूबर 2018 मा अद्यावधिक गरिएको थियो विश्व स्वास्थ्य संगठन को एक नयाँ नैदानिक ​​कोटि को मान्यता को खाता मा लेखा "बाध्यकारी यौन व्यवहार विकार“। पाइपलाइनमा अन्यसँग डच, अरबी र ह Hungarian्गेरियनमा अनुवादहरू उपलब्ध छन्।
2। बाल मनोचिकित्सक डा। भिक्टोरिया डन्क्लेको पुस्तक "आफ्नो बालबालिकाको ब्रेन रिसेट गर्नुहोस्"र उनको नि: शुल्क ब्लग बच्चाको मस्तिष्कमा धेरै पटक पटक प्रभावहरूको प्रभाव बुझाउँछ। महत्त्वपूर्ण रूपमा यसले एउटा योजना सेट गर्दछ जसले आमाबाबुले उनीहरूको बच्चालाई फेरि ट्रयाकमा लिन मद्दत गर्न सक्दछ।
डन डिक्कीले अश्लील प्रयोगलाई अलग गर्दैन तर सामान्यमा इन्टरनेट प्रयोगमा केन्द्रित हुन्छ। उनी भन्छिन् कि बच्चाहरु को 80% को लागी उनको मानसिक स्वास्थ्य विकार छैन जसको लागि उनको निदान गरिएको छ र यसको लागि दबाइ दिइएको छ, जस्तै एडीएचडी, द्विध्रुवी विकार, अवसाद, चिन्ता आदि। तर यसको बारेमा उनीहरुलाई 'इलेक्ट्रोनिक स्क्रिन सिंड्रोम' भनिन्छ। ' यो सिंड्रोमले यी सामान्य मानसिक स्वास्थ्य विकारहरूको धेरै लक्षणहरू झिक्न लगाउँछ। मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरु प्रायः अधिकांश अवस्थामा अवस्थामा3हप्ताको अवधिको लागि इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरू हटाउन सुरक्षित / कम हुन्छ।
उनको पुस्तकले बताउँछ कि कसरी आमाबाबुले यो बच्चाको विद्यालयको सहयोगमा चरण-दर-चरण आमाबाबुको मार्गदर्शकमा गर्न सक्दछ।
युवा बच्चाहरु को लागि पुस्तकहरु
"पन्डोराको बक्स खुला छ। अब के गर्छु? " गेल पियोरन एक मनोवैज्ञानिक हो र बच्चाहरु लाई सोच्न को लागी सोच्न उपयोगी दिमाग जानकारी र सजिलो अभ्यास प्रदान गर्दछ।
"राम्रो चित्रहरू, खराब चित्रहरू"क्रिस्टन जेन्सेन र गेल पियोरन द्वारा। बच्चाहरु को मस्तिष्क मा ध्यान केंद्रित गरेर एक राम्रो पुस्तक पनि।
बच्चाहरूको लागि होइन। बच्चाहरु को रक्षा। लिज वाकरले रंगीन ग्राफिक्सका धेरै जवान छोराछोरीहरूको लागि एक सरल किताब लेखेको छ।
आमाबाबुका लागि निःशुल्क अनलाइन स्रोतहरू
स्वास्थ्य, कानूनी र सम्बन्ध अश्लीलोग को प्रभावको बारे मा रिवार्ड फाउन्डेशन वेबसाइट मा छोड्ने सल्लाह संग जान्नुहोस्।
बालबालिका दुर्व्यवहार दानबाट उत्कृष्ट नि: शुल्क सल्लाह Stop It Now! अभिभावकहरू सुरक्षित राख्छन्
नयाँ ड्रगको फाइट गर्नुहोस् कसरी आफ्ना बच्चाहरुलाई पोर्नको बारेमा कुरा गर्ने।
यहाँ एक महत्वपूर्ण नयाँ छ रिपोर्ट बाट इन्टरनेट मेटिजहरू इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल पाईसीमा सुझावहरूसँग नेटमा सर्फिङ गर्दा तपाईंको बालबालिकालाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ।
बाट सल्लाह अनलाइन पोर्नको बारेमा एनएसपीसीसी.
स्कटल्यान्ड सम्पर्क मा माता पिता को लागी बच्चाहरू 1st.
युवा प्रयोगकर्ताहरूका लागि रिकभरी वेबसाइटहरू
अधिकांश भन्दा निःशुल्क निःशुल्क रिकभरी वेबसाइटहरू जस्तै yourbrainonporn.com; RebootNation.org; PornHelp; NoFap.com; Fightthenewdrug.org; महानताको लागि जानुहोस् र इन्टरनेट पोर्न को आदी धर्मनिरपेक्ष तर धार्मिक प्रयोगकर्ताहरू पनि छन्। पुन: प्राप्तिमा उनीहरूले कस्तो अनुभव गरे र अब उनीहरूले समायोजन गरे जस्तै सामना गरिरहेका छन् भनेर विचार गर्न आमाबुबाको लागि उपयोगी छ।
विश्वास आधारित स्रोतहरू
विश्वास आधारित आधारित समुदायहरूको लागि पनि राम्रो स्रोतहरू उपलब्ध छन् पूर्णता पुनर्स्थापित क्याथोलिकहरूको लागि, सामान्यतया मसीहीहरूको लागि नग्न सत्य परियोजना (बेलायत) कसरी अश्लील हानहरू (यूएस), र मुस्लिममटर इस्लामी विश्वास को लागी। यदि हामीलाई साइनपोस्ट गर्न सक्ने कुनै अन्य विश्वास आधारित परियोजनाहरू छन् भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग बच्चा रहेको छ जुन अटिजम स्पेक्ट्रममा छ भनेर मूल्या been्कन गरिएको छ भने, तपाईंले सचेत हुनु आवश्यक छ कि तपाईंको बच्चा न्यूरोटाइपिकल बच्चाहरू भन्दा अश्‍लील सामग्रीमा आकस्मिक हुने बढी जोखिममा हुन सक्छ। यदि तपाइँ शंका गर्नुहुन्छ कि तपाइँको बच्चा स्पेक्ट्रममा हुन सक्छ, तिनीहरूलाई राख्नु राम्रो विचार हुनेछ मूल्याङ्कन गरिएको यदि सम्भव छ भने विशेष गरी एएसडीको साथ युवा पुरुषहरू वा विशेष शिक्षा आवश्यकताहरू यौन अपमानजनकको लागि तथ्या in्कमा असंगत प्रतिनिधित्व गर्दछन्। यसले जनसंख्याको 1% व्यक्तिलाई असर गर्छ ठूलो सेक्सनमा अपराधीहरूको अधिक 33% स्पेक्ट्रममा छ वा सिक्ने कठिनाइहरू छन्।
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसअर्डर जन्मदेखि अवस्थित न्यूरोलॉजिकल अवस्था हो। यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या छैन। जबकि यो पुरुषहरूको बीचमा धेरै सामान्य अवस्था हो, महिलाहरूले पनि यसलाई लिन सक्दछन्। अधिक जानकारी को लागी यी ब्लगहरु मा पढ्नुहोस् अश्लील र स्वतन्त्रता; आमाको कथा; र आटोवाद: वास्तविक वा नकली?
बेलायत सरकारले बच्चाहरूलाई अनलाइन सुरक्षा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता स्थगित गरेको छ (रद्द गरिएको छैन)। यो हेर सरकारी मन्त्रीको पत्र इन्टरनेट सेफ्टीमा बच्चाको परोपकार गठबन्धनका सचिवलाई।
उमेर प्रमाणिकरण कानूनको उद्देश्य (डिजिटल इकोनॉमी एक्ट, पार्ट एक्सएनयूएमएक्स) वाणिज्यिक अश्लीलता कम्पनीहरूलाई अधिक प्रभावी उमेर प्रमाणिकरण सफ्टवेयर स्थापना गर्नु3बर्ष उमेर भन्दा कम उमेरकाले व्यावसायिक पोर्नोग्राफी वेबसाइटहरूमा पहुँच प्रतिबन्धित गर्न लगाउनु थियो। यो हेर ब्लग अधिक जानकारी को लागी यसको बारे मा। नयाँ नियमहरूले सामाजिक मिडिया साइटहरूको साथसाथै व्यावसायिक अश्‍लील सामग्री वेबसाइटहरू समाहित गर्न खोज्दछ।
इनाम पुरस्कारबाट थप समर्थन
कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि त्यहाँ कुनै विषय हो जुन तपाईं यस विषयमा आवरण गर्न चाहानुहुन्छ। हामी आगामी महिनाहरूमा हाम्रो वेबसाइटमा थप सामग्री विकास गर्नेछौं। हाम्रो ई-न्यूजलेटर इन्डर्डिङ समाचारमा साइन अप गर्नुहोस् (पृष्ठको पालामा) र हामीलाई पछिल्लो घटनाक्रमको लागि ट्विटरमा (@brain_love_sex) मा हामीलाई पछ्याउनुहोस्।
अभिभावकको गाईड अन्तिम पटक 11 नोभेम्बर 2019 मा अपडेट गरिएको थियो